नेपालीले छोड्नथाले, बिदेशीलाई प्यारो
जुलाइ ७, २००८
हामीलाई फलामको ताईमा पकाएको गिलो रोटी (पानी रोटीपनि भन्छन क्यारे) मन पर्दैन । तर त्यसैलाई बिदेशीले पान केक भनिदिएपछि हारालुछ चल्छ । भुटेको मकै र भटमास पाखण्डीले खाने ठान्छौं। तर बिदेशी रेस्टुरेन्टमा पप कर्न भन्दै डालीमा ल्याएपछि...
जुन १८, २००८
हाम्रो खासगरि दक्षिण एशियामा हामी अभ्यस्त भएका हुन्छौं चटकि हेरेर। मुलत काम नभएका र गरिखान मन नलाग्ने वा गरि खाने ठाउँ नपाएकाले गर्छन। हेर्नेपनि त्यस्तै हुन्छन भन्ने सोचिन्छ। चटकिवालले त्यस्तै नजानेका, नपढेका सोझासाझालाई टपरटुईयाँ कुरा सुनाएर ठग्छन...
यसरि पो रहेछ राम्रो फोटो खिच्ने?
जुन ११, २००८
जापानी पर्यटकहरुका बारेमा एउटा रोचक प्रसंग छ। भ्रमण गर्नु भनेको मुलत हेर्नु र आनन्द लिनु हो। तर जापानीका लागि त्यसो होइन। जहाँ घुम्न गइन्छ त्यहाँको फोटो हो रे महत्वपूर्ण। त्यसैले उनीहरु जहाँ घुम्न जान्छन, जे देख्छन् त्यसलाई...
हङकङमा पनि मनाईयो गणतन्त्रको उत्सव
जुन २, २००८
-राजेन्द्र अधिकारी, हङकङ गणतन्त्र दिवस मनाउनेक्रम जारी छ। स्वदेशमा सरकारले त्यो उत्सव मनाउन बिदा दियो र त्यहि दिन मनाए। बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुले भने आफुलाई अनुकुल समय र परिस्थिति मिलाएर मनाउदै छन। हिजो हङकङ निवासी गणतन्त्रवादी नेपालीहरुपनि यो...
हामी मात्रै छौं र?
मे १८, २००८
ठाउँ नभएपछि के गर्ने ? भएका सिटपनि मान्छे खाँद्न भनेर झिकेपछि बस्ने कहाँ ? आखिर जानै पर्छ। खाँदाखाँद छ भनेर जति पर्खेपनि अर्को खाली पाइने होइन। कि त लगाउनुपर्‍यो ११ नंबर। त्यसैले हामी आफ्नो देशमा खुब झुण्डिन्छौं...
पेरिसमा मे दिवस (फोटो ब्लग)
(कम्युनिष्ट नारा लाउदै टर्किस कम्युनिष्ट पार्टीका महिलाहरु) पेरिसमा मे दिवस मनाउन लागेको तेस्रो वर्ष हो यो। पहिलो वर्ष राजाको तानाशाही शासनका बिरुद्द केन्द्रित थियो। त्यो बेला चासो र चिन्तापनि बाक्लो थियो। राजाको त्यो शासन बिरुद्द लाग्नुपर्छ,...
सगरमाथामा हेलिकोप्टर, यि प्रमाणले के भन्छन त?
मैले अस्ति भनेकै थिए कि सगरमाथामा हेलिकोप्टर अड्याएका थप प्रमाणहरु म पेश गर्ने छु भनेर। म अहिले तिनै प्रमाणहरु पेश गर्दै छु। मेरो स्क्यानिङ मेशिनमा भएको खराबीका कारणले गर्दा मैले स्पष्ठसग राख्न सकिन। तर तिनलाई डिजिटल क्यामरा...
पत्रकारिता पेशा यस्तो हुन्छ कि जतिखेर जहाँ पुग्दापनि समाचारकै लोभ । नयाँ समाचारकै खोजि। ब्रेकिङ न्यूज कतै फेला पर्छ कि। अरुले ल्याउने आफुले ल्याउन नसके के होला? सम्पादकले के भन्लान ? सहकर्मीहरुका अगाडि कस्तो होला ? के...